Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) mu44mm isina simbi ine mutengo unoshamisa | Ndinobva mac
Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) mu44mm isina simbi ine mutengo unoshamisa
Kana iwe uri mumwe wevaya vari kufunga nezve kutenga iyo Apple Watch izvozvi, saka iwe uri mune mhanza uye isu takawana a Apple Watch Series 5 ine GPS + Cellular kubatanidza mune 44mm simbi isina simbi uye nzvimbo nhema ye 529 euros.
Mundima ino yekutanga chinyorwa chinopera sekuti shamwari yangu ingati, uye izvi ndezvekuti iyi 44 mm yemhando yesimbi isina waya ye529 euros inenge iri chipo. Zviripachena isu hatisi kutaura nezve iyo aluminium modhi uye kana nezve iyo modhi isina nhare mbozha ... Icho chaicho chibvumirano!
Iyo wachi inotengeswa pamakore e799 euros
Uye ndizvo izvozvo mutengo unowanzo kuve newachi iyi i800 euros. Kupa kweAmazon kunopera kana masheya apera saka kana iwe uchifunga nezve kutenga itsva Apple Tarisa iyi inogona kunge iri nguva.
Tenga pano yako Apple Watch mune isina simbi nzvimbo grey pamutengo wakanakisa
Zvine musoro kuti isu hatisi kutarisana neazvino modhi yeApple Watch, iyo Series 6, asi mabhenefiti atinorasikirwa tichienzanisa neyazvino modhi pane mashoma uye zviri kune mumwe nemumwe kusarudza kana kusatenga iyo yapfuura modhi. Iko kupihwa kwakanaka chaizvo chaizvo uye chete takaona uyu mutengo wakaderera kwazvo muchikamu chekupedzisira cheBlack Fridauye, asi zvikamu zviripo hazvina kugara kwenguva refu saka mune ino kesi isu tinotenda kuti zvakafanana zvinogona kuitika.
Kana iwe uchida iyi Apple Watch Series 6 yeKisimusi usazvidya moyo, panguva ino izvo zvinotumirwa zviri akagadzirira anotevera Zvita 23 Saka unosvika zvakanaka pazororo reKisimusi. Usapotsa wachi iyi kana wanga uchironga kutenga imwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) mu44mm isina simbi ine mutengo unoshamisa
Matambudziko ekubatanidza anowanikwa pakati peApple Fitness + neApple TV.
Iyo Zoom app inovandudzwa yeM1 uye inobvisa iyo 40 miniti muganho panguva yezororo reKisimusi